I-Ptengine: Iimephu zobushushu, iphulo, ukuKhangela ukuKhangela kunye noHlahlelo | Martech Zone
Ngelixa uninzi kubahlalutyi Amaqonga entengiso ayintsalela yetekhnoloji engaphaya kweminyaka engamashumi amabini ubudala, ubuchwepheshe obutsha bujolise kakhulu kukuziphatha komsebenzisi kunye nohlalutyo lwefaneli. Ubushushu ziindlela ezifanelekileyo zokubona ukuba abasebenzisi basebenzisana njani ngokuhamba kwexesha kunye nokuma kwendawo yakho, ukukhangela kunye nokubiza isenzo. iptengine unikezela ingqokelela yezixhobo ezakhelwe ngqo ezi njongo.
Uhlalutyo lweMephu yoBushushu -Thelekisa iimephu zobushushu phakathi kwamaphepha ahlukeneyo, amaxesha, kunye namacandelo angenamda wokujonga indlela yokuziphatha kweendwendwe ezahlukeneyo.
Cofa ubushushu -Yiba nomfanekiso-ngqondweni wedatha enqakraza ngombono we-thermographic, unike ukuqonda okukhawulezayo nangokulula kokuziphatha kwabatyeleli.
Ingqwalaselo yemephu yobushushu -Idatha eqokelelweyo inika ubungqina bokuba iindwendwe zigxila phi ngakumbi, inceda ukumisela eyona ntengiso ibekiweyo, inikezela ngolwazi oluphambili xa kuyilwa kunye nokuyilwa ngokutsha kwamaphepha okufika, kunciphisa ukushiya inqwelo yokuthenga, kwandisa ukuguqulwa kweefom ezikwi-intanethi, kunye nokuqikelela ukuba iindwendwe ziya kuyisebenzisa njani iwebhusayithi yakho kwixesha elizayo .
Ukubeka iliso kwizixhobo ezininzi - umkhondo kunye nokuhlalutya idatha kuzo zonke izixhobo kwaye ixhasa iisayithi ezakhiwe zoyilo oluphendulayo.
Uhlalutyo lwephepha -Isixhobo esomeleleyo sokuhlalutya ukuqokelela inani lonqakrazo kwizinto ezinonxibelelwano nezingasebenziyo. Nokuba ungawuphi na umbandela, fumana ukuqonda malunga nenani eloneleyo lokucofa kumaqhosha akho, imifanekiso, iividiyo, imenyu ezantsi kunye nokunye.
Skrolela ukufikelela kwimephu -Umbombo wokucofa kunye nokujonga ubushushu beemephu ukubonelela ngeyona pesenti yeendwendwe ezikrola kumacandelo athile ephepha lakho. Fumana ukuqonda okupheleleyo malunga nokuba kutheni iindwendwe zakho zishiya nje ukuba zifike kwiwebhusayithi yakho.
Uhlalutyo lweqela -Usebenzisa uMdlalo weNtloko, uMdlalo wokuPhela, uMdlalo ochanekileyo, kunye neRegex, iPtengine ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlalutya amaphepha anezinto ezifanayo, ezinje ngezihlangu ezinemibala eyahlukeneyo, iimoto ezinemodeli ezahlukeneyo, amanqaku ngababhali abohlukeneyo, amaphepha okufika anee-URL ezahlukeneyo. Gcina ixesha elichithwe ukulungisa i-URL yephulo esele ikhona.
amaphulo -Yila i-URL yephulo (okanye utshatise esele ikho), kwaye uhlalutye ukugcwala ngamagama, umthombo, phakathi, ixesha, kunye nomxholo.
Iifanele zokuguqula -Funda ukuba kutheni kwaye kutheni iindwendwe zimisa utyelelo lwazo, kunye nendlela ezihamba ngayo kwiwebhusayithi yakho yonke. Faka isicelo sePtengine's Heatmap kubahlalutyi kwiFunnel yakho yokuGuqula kwaye uguqule iindwendwe zibe kubathengi.
Isishwankathelo seNdwendwe seNene -Qokelela idatha kuhambo lomsebenzisi ngaxeshanye, ekuvumela ukuba wenze uhlengahlengiso lwentengiso olukhawulezileyo nolusebenzayo.
Uhlalutyo lweJografi -Ngokwexesha lokwenyani, khomba abasebenzisi iindawo zejografi
Iinkcukacha zeNdwendwe - jonga yonke idatha ebalulekileyo yeendwendwe ezifanayo, ezinje ngemisebenzi, ukukhangela umxholo, iinkqubo zokusebenza, izikhangeli zewebhu kunye namaphepha okudlulisa.
Bhalisela uvavanyo oluSimahla
tags: ingqalelo imephu yobushushuingqalelo imephu yobushushucofa imephu yobushushucofa imephu yobushushuuhlalutyo lwemephu yobushushuimephu yefutheimephu yobushushuiptengine